फिफा विश्वकप हरेक दुई वर्षमा ? «
फिफा विश्वकप हरेक दुई वर्षमा ?
प्रकाशित मिति : ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०९:०३
एजेन्सी – फुटबल नियामक संस्था विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले फुटबलमा विभिन्न परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको थाहा हुन आएको छ। विभिन्न समयमा फुटबलमा नियमहरु परिवर्तन गर्नका लागि अध्ययन संचालन गर्दे आएको फिफाले एक पटक पुनः अध्ययन अगाडी बढाउने भएको हो।
यस पटकको अध्ययन हरेक चार वर्षमा हुने फुटबल विश्वकपको सम्बन्धमा रहेको विभिन्न संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्। विश्वकप हरेक ४ वर्षमा भन्दा पनि हरेक दुई वर्षमा गर्ने विषय फिफाको वार्षिक कंग्रेसमा पनि उठेको छ।
फिफाका अधिकांस देशहरुले विश्वकपको चार बर्षे चक्रलाई परिवर्तन गर्न अध्ययन अगाडी बढाउन सहमति जनाएका छन्। साउदी अरबले कंग्रेसमा टेबल गराएको उक्त प्रस्तावको पक्षमा धेरै देश उभिएको बताइएको छ। उक्त प्रस्तावको पक्षमा फिफामा २ सय ९ सदस्य राष्ट्र मध्ये १ सय ६६ले मतदान गरेका थिए भने २२ राष्ट्रले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
यस भन्दा अगाडी फिफाको ग्लोबल फुटबल विकास प्रमुखको पदमा रहेका अर्सेन वेन्गरले हरेक दुई वर्षमा विश्वकप आयोजना गर्ने प्रस्तावलाई मार्च महिनामै अगाडी बढाएका थिए। दुई वर्षे अवधारणाको कुरा उठेको यो पहिलो पटक होइन। सन् १९९९ ३आ फिफाका तत्कालिन अध्यक्ष सेप ब्ल्याटरले पनि हरेक दुई वर्षमा फिफा विश्वकपको आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर युरोपियन फुटबल एसोसिएसनले विरोध जनाएपछि उक्त प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो।
फिफाको वार्षिक कंग्रेस पश्चात हरे दुई वर्षमा विश्वकप आयोजना गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बाटो खुलेको छ। यस भन्दा अगाडी विभिन्न समयमा कुरा उठेपनि वृहत छलफल नभएको यस विषयले अब थप मूर्त रुप लिने धेरैले आशा गरेका छन्। यधपी तत्कालका लागि विश्वकप दुईवर्षमा आयोजना गर्ने विषयमा अध्ययन मात्र हुन लागेको हो।